Inona no hatao any amin'ireo Nosy Solomon mahafinaritra | Vaovao momba ny dia
Inona no hatao any amin'ny Nosy Solomon mahafinaritra
Mariela Carril | | Oseania, Inona no ho hita
Raha maka sarintany ianao dia ho hitanao fa ny iray amin'ireo toerana lavitra indrindra any Eropa dia ny Pasifika atsimo, fa ny lavitra kosa dia tsara ihany koa. ny Nosy Salomon Eto atsinanan'i Papua Guinea izy ireo.
Kanto ireo nosy, miaraka amin'ny morontsiraka mahafinaritra, fonenana mahatalanjona, tantara mifandraika amin'ny WWII sy ny hatsaran-tarehy na an-tanety na ambanin'ny rano turquoise izay manodidina azy ireo. Sidina lavitra mankamin'ny paradisa, fa hahazo valisoa ianao.
1 Ny Nosy Solomon
2 Fetin'ny Nosy Solomon
Ny Nosy Solomon
Izany dia archipelago misy nosy lehibe enina misy nosy kely an'arivony. Ny renivohitra dia ao amin'ny nosy Guadalcanal ary tanànan'ny Honiara. Tamin'ny faran'ny taonjato faha-XNUMX dia nofantsihan'ny Anglisy ny sainam-pireneny ary nanjary mpiaro anglisy ireo nosy, izay nahazo fotoan-tsarotra tamin'ny fifandonana teo amin'ny tontolo faharoa, lasa mahaleo tena izy ireo tamin'ny faramparan'ny taona 70. Ankehitriny dia manohy manaiky ny Mpanjakavavy Elizabeth II ho mpanjaka izy ireo.
Tamin'ny andron'ny Anglisy dia samy nanararaotra ny toeram-pambolena voanio avokoa na ny anglisy na ny aostraliana mandra-pahatongan'ny Ady faharoa. Nesorina àry ireo nosy ary nilaozana ireo voly. Ny ankamaroan'ny ady nahadomelina indrindra teo amin'ireo mpiray dina sy Japoney dia nitranga teto, ohatra, ny Adin'i Guadalcanal. Ny marina dia tsy misy ny fahaleovan-tena mora ary ny fiainana politika eto amin'ireo nosy dia tsy nilamina loatra tamin'ny taonjato faha-XNUMX sy tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-XNUMX.
Momba ny toetrandro mando ny nosy mandritra ny taona miaraka amin'ny maripana 27 ºC. Handeha hitsangatsangana ary tsy ho faty hafanana amin'ny volana tsara indrindra miaraka amin'ny Jona, Jolay ary Aogositra. Mety orana bebe kokoa na manana rivodoza eo anelanelan'ny Novambra ka hatramin'ny Aprily. Mikasika ny asa ara-toekarena dia manondrana hazo ny Solomonon ary izany no atahorana ho trandrahana tafahoatra ny ala. Nandritra ny fotoana fohy izao dia nitombo ny fizahantany antsitrika sy snorkeling.
Farany, hitadidy ao an-tsaina: Na dia ny teny anglisy aza no fiteny ofisialy, dia saika tsy misy miteny azy isan'andro. Miteny ny Pijin, ny fiteny eo an-toerana, ary ireo fitenim-paritra maro hafa.
Fetin'ny Nosy Solomon
Mba handehanana any Salomon dia mila pasipaoro ary miankina amin'ny firenenao, visa. Raha Eoropeana ianao dia azo inoana fa tsy mila iray hijanona mandritra ny 90 andro. Rehefa mahalala bebe kokoa momba ireo nosy tsara tarehy ireo isika dia tonga ny fotoana hijerena izay azontsika atao aorian'ny vitsy Dia an-tongotra 29 ora avy any Eropa ary 30 avy any Amerika atsimo.
Ny haren'ny Nosy Solomon dia ao anaty rano. Betsaka ny miampita ny ranomasina mba hahafantarana ny fahagagana fotsiny Miorina amin'ny faritra fantatra amin'ny hoe Coral Triangle izy ireo. Ny rano tsara sy manankarena dia nambara ho iray amin'ireo Fahagagana voajanahary fito any Oceaníka alaivo sary an-tsaina ny fahasamihafan'ny trondro sy haran-dranomasina hitanao eto.
Misy ny sasany Karazana haran-dranomasina 500 malefaka sy mafy ary izy rehetra dia mamorona a haran-dranomasina mihoatra ny 5.700 kilometatra toradroa.
Etsy ankilany, ny vatoharan-dranomasina dia fonenan'ny biby maro trondro miloko, barracudas, feso feso, stingray, sokatra ary antsantsa. Eo ambanin'ny rano ihany koa, araka ny efa nolazainay tetsy ambony, misy fahatsiarovana ny adin'izao tontolo izao ii: fiaramanidina, sambo, sambo mpitondra solika, mpandrava, fiaramanidina japoney, sambo mpisitrika ... Na dia tena akaiky ny renivohitra aza, amin'ny faritra fantatra amin'ny hoe Feo ambany vy.
Misy faritra hafa ao antsitrika sy snorkeling tena tsara ary ny hafa izay manompo maka sary. Ohatra, ny tsara tarehy Lagoon Marovo, ny farihy masira lehibe indrindra eto an-tany voahodidin'ny nosy kely tsy misy mponina miaraka amoron-dranomasina nofinofy toa ny Nosy Uepi. Misy koa ny Roviana Lagoon, 50 kilometatra miala an'i Munda ary akotry ny haran-dranomasina sy ny nosy. Ao anatiny kosa no misy ny Cave Karkom Shark Cave, miafina ao anaty ala honko ary ny fisokafany misy rano manga misy rano mangatsiaka midina ao anaty tambajotran'ny zohy.
Raha te-hijery ny kolontsaina eo an-toerana ianao dia afaka mitsidika ny sasany aminy toerana arkeolojika, trano mimanda eny an-kavoana, fitoerana masina feno karandoha, ohatra. Ny mponina amin'ireo nosy dia manam-pahaizana manokana momba ny asa hazo koa betsaka ny asa-tanana (sary sokitra, firavaka, harona) vita amina teknika nentin-drazana any amin'ireo tanàna rehetra ary lasa fahatsiarovana tsara rehefa mandeha ny fotoana.
Betsaka ny fitsangatsanganana hatao TrekkingIreo dia fitsangatsanganana fohy avy any Honiara izay hahatonga anao hitsidika tanàna sy morontsiraka fotsy, na dia fitsangatsanganana any amin'ny nosy hafa aza. Azonao atao mihitsy aza mianika volkano, ny Kolombangara, volkano conical haavo 1770 metatra ny haavony izay misy fiakarana an-tongotra mandritra ny roa andro avy eo amin'ny morontsiraka ka hatrany amin'ny vava volkano. Matory anaty toby izy ary izy no betsaka.
Fa raha mihoatra ny mandeha ianao dia toy ny rano dia mankamin'ny morontsiraka mahafinaritra ianao dia afaka manampy riandrano. Ny sasany tena malaza dia Rano Mataniko, izay miafara amin'ny dobo sy lava-bato miafina. Ity tranonkala ity dia fantatra amin'ny alàlan'ny torolàlana ary amin'ny ankapobeny a Fitsidihana WWII. Ary afaka misoratra anarana ihany koa ianao fitsangatsanganana fanjonoana, fitsangatsanganana kayak amin'ny alàlan'ny lagozy turquoise misy rano mangarahara sy mafana. Azonao an-tsaina ve izany?
Farany, toerana toa ity no mendrika hatory amin'ny toerana manokana. Mazava ho azy misy trano fandraisam-bahiny, trano fandraisam-bahiny, kabine fanofana, toerana misy backpacker, trano fandraisam-bahiny y trano fandraisam-bahiny mahafinaritra izy ireo. Raha mbola tsy nijanona tao amin'ny trano fandefasana teti-bola ianao eto amin'ny Solomonon, dia misy tena tsara tarehy.
Jereo, mety ho dia lavitra izany, tsy dia mora loatra noho ny halaviran-toerana ary satria ny fitsidihana ireo nosy dia midika hoe miakatra sy mivoaka sambo na misoratra anarana hanao fitsidihana maso ivoho, fa raha tianao ny toerana itodiana, lavitra, tsara tarehy sy tsy fantatra. ... tsara miandry anao ny Nosy Solomon.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Oseania » Inona no hatao any amin'ny Nosy Solomon mahafinaritra
Fitsidihana tena ilaina 16 any Sardinia I
Ahoana ny fomba ahazoana pasipaoro vonjy maika?